घामड शेरे ट्रेलर: खोलाविरुद्दको मुद्दामा न्याय खोज्दै निश्चल « THE CINEMA TIMES
घामड शेरे ट्रेलर: खोलाविरुद्दको मुद्दामा न्याय खोज्दै निश्चल
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्का स्टारर सिनेमा ‘घामड शेरे’को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरले सिनेमाको कथाबस्तु, परिवेश, पात्र र परिस्थिति उजागर गरेको छ ।
सिनेमाको फर्स्टलूकमा निश्चलको धुलाम्य अवतार प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछिको गीतमा निश्चल र स्वस्तिमालाई साली-भेनाको रुपमा परिचय गराइयो । यी प्रचारले सामाग्रीले सिनेमाप्रति दर्शकको कौतुहलता उच्च विन्दुमा पुर्याइदिएको थियो ।
हेमराज बिसी निर्देशित सिनेमाको ट्रेलरले यी कौतुहलता मेटाउदै नयाँ कौतुहलता शृजना गरिदिएको छ । सिनेमाको शिर्ष भूमिकामा निश्चल छन् । विदेशबाट आर्जित रकममा किनिएको जग्गा खोलाको बगरमा परेपछि घामड पात्रले कानुनी प्रक्रिया अपनाउछ । विचौलिया उम्किने भएपछि उ खोलाविरुद्द मुद्दा हाल्ने निर्णयमा पुग्छ ?
के खोलाविरुद्दको मुद्दामा उसले न्याय पाउला त ? त्यसको लागि कार्तिक ८ गतेसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । सिनेमामा स्वस्तिमा खड्काले ‘घामड शेरे’को सालीको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । भने, सुष्मा निरौला पत्नीको भूमिकामा छिन् ।
निर्देशक विसीकै कथा, पटकथा रहेको सिनेमालाई कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सल्यान जिल्लामा खिचिएको छ । सिनेमामा बादल भट्ट, लोकेन्द्र लेखक, रोय, सरोज अर्याललगायतका कलाकारको पनि अभिनय छ ।
बिसी मोसन पिक्चर्सको व्यानरमा निर्मित सिनेमामा कालीप्रसाद बाँस्कोटाको संगीत, नरेन्द्र मैनालीको डिओपी र सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन छ । नरेन्द्रविक्रम बुढा क्षेत्री कार्यकारी निर्माता रहेको सिनेमामा निर्देशक बिसी र सिमोश सुनुवारको लगानी छ ।